China China mveliso 5052 PVDF umbala camera aluminium coil ubukhulu abavelisi be-0.7mm kunye nabathengisi | Huifeng
Umbala we-coil aluminium coil
China mveliso 5052 PVDF umbala wawutyabeka aluminiyam coil ubukhulu 0.7mm
I-aluminium enombala ogqunywe ngombala (i-coil-coil aluminium coil), i-aluminium eqhelekileyo egqunywe ngombala (i-coil-coil aluminium coil), isetyenziswa ngokubanzi kwiipaneli zobusi bealuminium, iisilingi zealuminium, umphezulu ophahleni kunye nezinto ezishiyekileyo. Ukusebenza kwayo kuzinzile kakhulu, kwaye akukho lula ukonakala. Uhlobo lwezinto ezintsha.
Ingcaciso coil aluminiyam
Inombolo yengxubevange: 1060, 1070, 1100, 2A12, 2024, 3003,3004, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 6082, 7075 njl
Isimo: H32 H24 H16 H18 O H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
Ububanzi beCC 100-1700mm
Unyango oluphezulu: Ukugqiba kweMill, i-embossing, i-anodized, i-color coating, i-Polishing
Ipeyinti ye-aluminium egqunywe ngombala yahlulwe yaya: I-polyester eyenziwe nge-aluminium coil (PE), i-coil aluminium coil aluminium coil (PVDF). Ukutyabeka ipholiyesta okwenziwe ngokubhaka umphezulu weplastikhi yealuminium amaxesha amaninzi kunokubambelela ngokuqhubekayo nangokuqinileyo. Ifilimu eqinileyo ineempawu zokukhusela. Ingubo yokulwa ne-UV. I-resin ye-polyester isebenzisa i-ester bond-equkethe i-molecular polymer ephezulu kwikhonkco ephambili njenge-monomer, kunye ne-alkyd resin yongezwa. I-absorber ye-ultraviolet inokuhlulwa kwi-sub-gloss kunye ne-high-gloss series ngokwe-gloss. Inokudlulisa imibala etyebileyo kwiimveliso zealuminiyam enemibala, kwaye ine-gloss elungileyo kunye nokuguda, kunye nokuthambeka okuphezulu kunye nokuziva, kwaye inokunyusa imeko yokubeka kunye nobukhulu obuthathu. Inokukhusela izinto ekuvezeni iatmosfera nasekuhlaselweni yimitha yelanga, umoya, imvula, iqabaka, ikhephu kunye nengqele; ukutyabeka kunokudlala indima ekhuselayo ngenxa yomahluko wobushushu, imijikelo yomkhenkce womkhenkce, iigesi ezonakalisayo kunye neentsholongwane. Ingakumbi ifanelekile ukuhombisa ngaphakathi kunye neebhodi zentengiso
I-Fluorocarbon Camera Coated Aluminium Coil (PVDF)
Ukutyabeka kweFluorocarbon yi-PVDF resin ubukhulu becala ibhekisa kwityhubhu ye-vinylidene fluoride homopolymer okanye ikopolymer yele vinylidene fluoride kunye nezinye izixa ezincinci ze-fluorine eziqukethe ii-monomers ze-vinyl. Ubume beekhemikhali bezinto ezinesiseko se-asidi ye-fluoric zidityaniswe ne-fluorine / bond bond. Ukuzinza kunye nokuqina kolu lwakhiwo lweekhemikhali zenza iipropathi zomzimba zokwaleka kwefluorocarbon zahluke kwinto eqhelekileyo. Ukongeza kwiipropati zoomatshini bokunxiba ukunganyamezeli, ukumelana nefuthe kunentsebenzo egqwesileyo, ngakumbi kwimozulu engqongqo kunye nokusingqongileyo kubonisa ukumelana nexesha elide, ukusebenza ngokuchasene ne-ultraviolet. Emva kokugrumba kubushushu obuphezulu ukwenza ifilimu, ubume beemolekyuli kwinto yokutyabeka buqinile kwaye bunokumelana nemozulu okuhle. Iingubo zeFluorocarbon zingahlulwahlulwa zibe yiflococarbon yesiko kunye nano fluorocarbon ukutyabeka ngokobume bokwakheka kwefilimu komhlaba.
Ikhoyili ye-aluminium enombala inombala otyebileyo, nokuba kukwindawo yokuhlala yoluntu, iindawo ezinkulu zentengiso okanye amaziko emiboniso emikhulu, iikhoyili ze-aluminium ezenziwe ngombala zinokongeza umbala kuyo. Iiplastikhi ezilungileyo kunye neepropathi zomatshini zenza ukuba ibe yinto efanelekileyo kwiimilo ezahlukeneyo zokwakha. Iikhoyili ze-aluminium ezenziwe ngombala zibonelele ngee-architects, abayili kunye nabanini ngendawo yombala eyenzelwe wena iindonga zangaphandle kunye nophahla, kwaye ikwangoyena ndoqo wemodeli yoyilo loyilo. Nokuba sisakhiwo esikhulu esisebenza ngemisebenzi emininzi okanye isakhiwo esineendlela ezintsha nesiyilayo, i-coil aluminium enombala ungasoloko uhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zezitayile zangoku kunye nezakudala zokwakha, zisenza eso sakhiwo sibe semibala ngakumbi. Iimveliso zisetyenziswa kwiinkalo ezininzi ezinjengezixhobo zombane, izixhobo, ukukhanya, ukupakisha, ukuhombisa ikhaya njalo njalo.
Imveliso isebenzisa uluhlu olubanzi: ulwakhiwo (ipaneli yealuminium edityanisiweyo, ubusi bealuminium, ibhodi enophahla, isithsaba somlilo, isilingi yealuminium, izitshixo, ucango oluqengqelekayo, ucango lwegaraji, umthunzi, ukuwa kwegatha), izixhobo zombane (ityala lekhompyuter, iphaneli yombane), Izibane, ifanitshala, izibonakalisi zelanga, imibhobho yomoya-moya, njl.
Egqithileyo Yenziwe ngetsimbi yentsimbi yokugquma ialuminium sheet inceda ialuminium sheet
Okulandelayo: Igama elihle elikhutshiweyo ingxubevange 6061 6082 5083 2024 7075 bar yealuminium ejikelezayo
Ikhoyili yealuminium edibeneyo
umbala coil aluminium coil
PE camera coil aluminiyam
I-PVDF coil aluminium